vahaolana ho an'ny tsindrona
Gentamycin Sulphate 10% tsindrona
Amoxicillin mety levona Powder
Hiova Glutaral Solution
ANARANA: Florfenicol fanaovana: 5%, 20% toetra: Ity vokatra dia saika fotsy na fotsy vovoka. PHARMACOLOGICAL: hita: Fa ny fitsaboana ny aretina ateraky ny bakteria mora bakteria indrindra fa ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina-bakteria mahery nahatonga aretina. Izany dia mahomby mpisolo toerana ny chloramphenicol tsindrona. Ampiasaina ihany koa izy io ho amin'ny fitsaboana ny aretina amin'ny biby fiompy sy ny vorona vokatry ny pasteurella, pleuropneumonia actinomyceto, streptococcus, colibacillus, Salmona ...
Ity vokatra dia saika fotsy na fotsy vovoka.
Fa ny fitsaboana ny aretina ateraky ny bakteria mora bakteria indrindra fa ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina-bakteria mahery nahatonga aretina. Izany dia mahomby mpisolo toerana ny chloramphenicol tsindrona. Ampiasaina ihany koa izy io ho amin'ny fitsaboana ny aretina amin'ny biby fiompy sy ny vorona vokatry ny pasteurella, pleuropneumonia actinomyceto, streptococcus, colibacillus, Salmonella, pneumococcus, hemophilus, Staphylococcus, mycoplasma, chlamydia, leptospira sy rickettsia.
(1) Ity entana no ambony noho ny soso-kevitra iray fatra ny ambaratongam-ny hery fiarovan'ny.
(2) embryotoxicity, fampitandremana mandritra ny fitondrana vohoka sy ny lactation ny biby fiompy.
Levitra SY ADMINISTRATION:
5% Florfenicol mety levona vovoka:
20% Florfenicol vovoka: Oral, isaky ny lanjany 1Pj, kisoa, akoho 0,1 ~ 0.15g, 2 isan'andro, indray mandeha isaky ny 3 ka hatramin'ny 5 andro; trondro 50 ~ 75mg, ny 1 andro, indray mandeha isaky ny 3 ka hatramin'ny 5 andro.
(1): Mitadiava akohovavy kilemaina.
(2) mankarary ny biby mandritra ny vaksiny na mafy immunocompromised aretina.
(3) ny tsy fahampian'ny Renal dia tokony ho araka ny tokony ho mihena na naharitra dosing elanelam-potoana io.
(4) foana avy amin'ny takatry ny ankizy.
20 kisoa, akoho 5, trondro 375 ambaratonga.
Recommended talantalana NY FIAINAKO:
Store amin'ny mangatsiaka, toerana maina miaro amin'ny mazava.
Previous: Fenbendazole Powder
Next: Gentamycin Solfata mety levona Powder
Animal Antibiotika Fitsaboana
Animal Dewormer Fitsaboana
Chicken Weight Mahazo
Colistin Solfata Powder
Doxycycline Fitsaboana akoho amam-borona
mandaitra To biby fiompy sy akoho amam-borona
Oxytetracycline hydrochloride tsindrona 100ml
Oxytetracycline tsindrona biby
Kisoa Medicine Kisoa Weight Gainer
akoho amam-borona Antiviral zava-mahadomelina
akoho amam-borona Feed Fitsaboana
akoho amam-borona Fitsaboana
akoho amam-borona katsentsitra Zava-mahadomelina
Powder tsindrona Fa Animal Ampiasao
Veterinary Antibacterial zava-mahadomelina
Veterinary Injectable Antibiotika
Veterinary Fitsaboana ho fiandrasana omby aman'ondry
Weight Mahazo Fitsaboana
Weight Mahazo Supplements
Ampicillin Sodium mety levona Powder
Lincomycin hydrochloride mety levona Powder
Fumarate Tiamulin mety levona vovoka
Vitamina C mety levona Powder